Aids-ka oo laga xusey Garowe 1 Dec 1, 2012 - 3:30:12 AM
Wasaarada caafimaadka dawladda Puntland ayaa si weyn u xustay maanta 01 December,2012 malinta isku bararaujinta HIV Aids sannad kasta caalamka laga xuso,waxaana shirka maanta oo wasaaradda caafimaadka lagu qabtey ka qayb-alay, Masuuliyiinta Wasaradda caafimaadka Puntland,Dhakhaatiirta, PAC, hayadaha WHO,IOM,Culima'udiin & Ururka SORDO oo ka mid ah kuwa ka shaqeeya Arimaha HIV-AIDS iyo sidii looga hortegi lahaa.
Munaasibadan uu soo qabanqaabiyey Dr C/salan Caydiid oo wasaaradda caafimaadka u qaabilsan waaxda la dagaalanka HIV AIDSka ayaa ka warbxiyey xaaladaha xanuunka ee gudaha Puntland,wxuuna ku dheeraaday sida wasaarada caafimaadku qayb weyn u siiso ka hortega xanuunkan wuxuu sheegay in labadii sanno ee la soo dhaafay uu hoos u dhacay,isagoona bulshada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan dhamaan waxkasta oo sahli kara in ay qadaan.
Madaxaxa WHO ee Puntland Dr Shiikh Cali Cabdi Ciise oo isna hadlay ayaa ku dheeraday siyabaha loo kala qaado iyo sida looga hortego,wuxuuna shiikhu uu diirada saaray diinta islaamku sida ay xarimtay sinada oo ka mid arimaha ugu waawayn uu cudurkani u faafo.
Agaasimaha wasaarada Cafimaadka Puntland Dr Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa isna si qoto-dheer uga hadlay dawrka ay wasaaradu ka qaadanayso xakamaynta HIV AIDS-ka,wuxuuna agaasimuhu tilmaamay in dalalka Somalia la deriska ah uu aad u saameeyey HIV AIDS taasina ay sababtay inuu kor u kaco,walaw uusan weli gaadhin 1%.
Masuliyiinta kele ee halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Xuseen Xasan oo ka socday haya'adda IOM oo Socdaalka dunida qaabilsan,wuxuuna Xuseen farta ku fiiqay in dadka ugu nugul xanuunkan ay yihiin darawalada,dadka socdaala ama xuduudaha ka talaaba, burcadbadeeda ayuu sheegay inay aad u gudbiyeen ka dib markay u yeedheen xitaa dumar Ajanibiya aysan isticmaalin waxa ay iskaga ilaaliyan amaba aysan fahansanayn HIV-AIDS.
Wasiir ku xigeenka wasaarada caafimaadka Puntland Maxamed Xirsi Ducaale oo shirkan soo xiray ayaa baraaujinta bulshada ee ah inay iska ilaaliyaan Xanuunkan iyo siyaabaha ay iska ilaalinyaan,waxaa si mutawacnimo ah uu iskaga baaray HIV AIDS.
1995-tii aya madaxweynihii hore Maraykanka Bill Clinton ayaa ku dhawaaqay in 1-da December loo asteeyo maalinta caalamiga ah ee Aids-ka, iyadoo waddamo badanna ay taageereen xuska maalinta.